Fepetra mifehy eto amin'ny GASY.INFO
Teny malagasy no ampiasao: raha hampiditra tolobarotra na filazana eto ianao dia mba ezaho ho teny malagasy no ampiasaina. Izany anefa tsy midika fa voarara tanteraka ny mampiasa teny vahiny eto.
Hajao ny lalàna malagasy na amin'ny firenena misy anao: tandremo ny fomba fitenenana mamoafady na mety manafitohina ny hafa, ny fanehoan-kevitra fifamaliana, ny resaka ara-politika, sy ny fomba fifandraisana hafa rehetra tsy mifanaraka amin'ny fomba mendrika sy ara-dalàna.
Ataovy mazava ny tolobarotra na filazana: ampidiro ao amin'ny sokajy tokony hisy azy araky ny karazany ny tolobarotra sy ny filazana. Ho an'izay tsy voafaritr'ireo sokajy efa misy dia ampiasao ny sokajy "Filazana samihafa", na koa anontanio ny Mpintanana raha afaka atao ny famoronana sokajy hafa vaovao.
Tsy azo atao ny mampiditra tolobarotra sy filazana miverimberina: raràna ny mampiditra tolobarotra na filazana mitovitovy na dia samy hafa aza ny sokajy ampidirana azy. Raha toa ka maromaro ny isan'ny zavatra avarotrao dia soraty ao amin'ny vontoatin'ny tolobarotra izany, fa aza ampidirina tsirairay.
Mariho tsara iza no mandefa ny tolobarotra na filazana: mariho mazava raha olon-tsotra na mpiasan'orinasa ianao na koa mpanera.
Farito mazava ny tolobarotra na filazana atao: entana voafaritra na filazana mazava tsara ihany no azo ampidirina eto. Ezaho ny manome fanazavana ampy sady mirindra. Raràna ny tolobarotra misy toy ny hoe "manorata e-mail raha mila fanazavana fanampiny". Tsy ekena ny fanaparitahina ny adiresy e-mail-n'ny mpanjifa eto mba tsy hisian' ny tetika na tanjona ambadika hampiasana azy ireny (spam).
Rarana ny fifaninanana: tsy azo atao ny mampiditra filazana momba ny tranokala hafa mitovitovy rafi-panorenana amin' ny GASY.INFO, na koa ny fanaovana tolobarotra ho azy ireny eto amin' ity tranokala ity.
Ataovy mangarahara ny fampiasanao ny GASY.INFO: Tsy azo atao ny mamorona compte maro ho an'olona iray(1) ka manana solonanarana samihafa. Raràna ny mampiditra information tsy marina (anarana, taona, sns.).
Tomponandraikitra amin'ny ataony ny tsirairay: ny GASY.INFO dia sehatra ahazoan'ny mpanjifa tsirairay handefasana tolobarotra sy filazana ka tsy tomponandraikitra amin'izay atao sy soratan'ny tsirairay eto. Izay mpanjifa mampiasa ny GASY.INFO dia manamarina fa namaky ireto fepetra ireto ka manaiky izany.
Tsy azo adika ny tahiry eto amin'ny GASY.INFO: Raràna ny mandika, manaparitaka ny tahiry eto raha tsy mahazo alalana avy amin'ny Mpitantana.
Ny sokajy "Namana & Sipa" dia natao ho an'ny feno taona ihany: Izay feno 18 taona miakatra ihany no afaka mijery sy mampiditra filazana ao amin'ny sokajy "Namana & Sipa". Raràna ny mandainga momba ny taona nahaterahany, ary ny fidirana amin'io sokajy io dia manambara ianao fa feno 18 taona miakatra tokoa.
Ho voarara hiditra eto izay mandika ireto fepetra ireto: Hoesorina eto izay tahiry rehetra mandika ny fepetra voalaza eto ary ho voarara ny hiditra eto amin'ny GASY.INFO (IP ban, sns.) izay olona manao izany.
Vakio matetitetika ny fepetra: Azon'ny Mpitantana atao ny manova sy manitsy ny fepetra, ka manomboka manakery izany raha vao miseho eto amin'ity takelaka ity.
Fanomezan-toky avy amin'ny mpitantana: Manome toky ny Mpitantana fa tsy hanome olon-kafa ny mombamomba ny mpikambana. Hiezaka koa ny mpitantana hanao izay tsy hahavery ny tahiry mipetraka eto amin'ny GASY.INFO. Raha misy anefa ny tsy mety, dia tsy voafatotra amin'izany ny Mpitantana.
Tsy azo atao ny mampiditra teny ratsy na mety manafintohina ny sasany.
Ny mpikambana ihany no afaka mampiditra teny sy ohabolana.
Azon'ny mpikambana atao ny manamarina ny teny na ohabolana nalefan'ny mpikambana hafa.
Vita anio: 1.6.2010
Nahitsy anio: 1.1.2011